सभामुख हटाउन देउवा-ओली मिल्छन त ? | Nepal Ghatana
सभामुख हटाउन देउवा-ओली मिल्छन त ?
प्रकाशित : २३ माघ २०७८, आईतवार ०५:५०
एमसीसी समझौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाज विभाजित छ । त्यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत खटपट शुरु भएको छ । सत्तँसाझेदारी दलहरुले एमसीसी अनुमोदन गराउन असहयोग गर्ने भए पछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ खोज्न थालेका छन । एमालेले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिन सभामुख हटाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन(एमसीसी) को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच दुरी बढ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा भएपनि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीसंग नजिकन थालेका छन् । जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने प्रयत्न गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा सके गठबन्धबाटै नसके एमालेलाई साथमा लिएर भए पनि एमसीसी पास गर्न लागि परिरहेका छन ।
एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमा ओली—देउवाको समान धारणामा छ । एमाले कांग्रेस मिल्दा संसदमा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । तर संसदमा सभामुख अग्नि सापकोटा एमाले—कांग्रेसका लागि बादक बनेका छन् ।
एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्ने सवालमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय समझदारी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास गर्ने सर्तमा सभामुख सापकोटा हटाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन । एमालेबाट फुटेका सांसदहरुलाई कारबाही नगरेको भन्दै अध्यक्ष ओली सभामुख सापकोटाविरुद्ध आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।
एमसीसीकै बहानामा एमालेले गठबन्धन तोड्ने रणनीति समेत लिएको छ । गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसंग एमालेले बद्ला लिने तयारी गरिरहेको छ । गठबन्धन कयमै रहे आगमी तीनै तहका निर्वाचनमा एमालेलाई धेरै थोरै नोक्सान हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपी एमाले नेताहरुले भने जनतम एमालेको पक्षमा रहेकाले गठबन्धन तोड्न आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन ।
जसरी पनि एमसीसी पास गर्न प्रयत्न गरेको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन कायम राख्न दाहाल—नेपालले एमसीसी पास गराउन सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्ने सर्त राखेको छ । एमसीसी पास गर्ने विषयमा एमाले—कांग्रेसको समान धारणा भए पनि सभामुख हटाउने विषयमा भने कांग्रेस भित्र कुनै छलफल नभएको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसकै नेतालाई बल पुग्ने गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धनमा सभामुख हटाउने कुनै प्रस्ताव पेश नभएको दाबी गरेको छ ।
एमसीसी पास गर्न एमाले कांग्रेसको बहुमत पुगे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव अनुसार सभामुख हटाउन भने दुबै दलको मत पुग्दैन । अहिले प्रतिनिधि सभामा २ सय ७१ जना सांसद छन्। त्यसमा एमाले ९८ र कांग्रेसका ६१ जना गरी एमाले कांग्रेसका १ सय ५९ जना सांसद छन। तर दुई तिहाइ पुग्न १८१ जना सांसद चाहिन्छ । जसपा पनि एमसीसीका पक्षमा सकारात्मक भएकाले जसपाका १९ जना सांसदले साथ दिए पनि दुई तिहाईका लागि अझै संख्या पुग्दैन ।
त्यसमा एक सिट मात्र रहेको राप्रपा, नेमकिपा र दुईजना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिए भने मात्रै संसदमा दुई तिहाई पुग्छ । तर स्वतन्त्र सांसदले साथ नदिएको अवस्थामा एमाले कांग्रेसलाई लोसपाले साथ दिनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन १६ गते भित्रै एमसीसीबारे संसद्मा औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिइसकेका छन् । एमसीसी कै कारण सत्तागठबन्धम कायमै रहन्छ अथवा नयाँ समिकरण बनेर नेपालको राजनीति अघि बढ्छ त्यो भने समयले देखाउने छ।
सामूहिक प्रयासको खाँचो श्रम अधिकार कार्यान्वयनका लागि
भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले मुलुकलाई नै सिध्याइदिन्छ: सभामुख सापकोटा
एकताका साथ व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह